Trojan Zeus ဗိုင်းရပ်စ် Facebook တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိ ~ TRA-Myanmar
၂၀၀၇ ခုနှစ်က ပထမဦးဆုံး ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် Zeus Virus မှာ နာမည်ကြီးလူမှုရေးကွန်ရက် facebook တွင် ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြောင်းသိ့ရသည်။ အဆိုပါ virus သည် အန္တရာယ်အရှိဆုံး Trojan များအနက် တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၄င်းသည် Facebook ကိုအသုံးပြုကာ ကွန်ပျူတာများထံကူးစက်ပျံ့နှံ့နေကြောင်း Techspot.com မှ ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ Trojan Zeus Virus သည် "Bring th NFL to Los Angeles" ကဲ့သို့သော Facebook စာမျက်နှာများပေါ်ရှိ Link အတုများတွင် ပါဝင်ကြောင်း ၄င်း Link ကို နှိပ်မိလိုက်သည့်အခါ Facebook စာမျက်နှာမှ download စာမျက်နှာတစ်ခုထံရောက်ရှိသွားပြီး software တစ်ခုကို download ပြုလုပ်ခိုင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ software ကို download ပြုလုပ်မိသည့်အခါ virus ကို download ပြုလုပ်ပြီး bank account များ၊ password များနှင့် account နံပါတ်များ၊ social security နံပါတ်များနှင့် အခြားအရေးကြီး အချက်အလက်များ ခိုးယူခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိ့ရသည်။
ထို့အပြင် facebook ပေါ်ရှိ သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုဝင်များမှ တင်ထားသည့် Link များကိုလည်း အထူးဂရုပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ link တစ်ခုခုမှ ပြင်ပ site တစ်ခုရှိ အရာများကို download ပြုလုပ်ခိုင်းပါက source ကို အသေအချာ စစ်ဆေးသင့်ကြောင်း၊ သံသယရှိပါက download မပြုလုပ်သင့်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။
Eurograbber ဟု လူသိ့များသော virus သည် zeus နှင့် အလားသဏ္ဍန်တူပြီး ၄င်း virus သည် ဥရောပတိုက်သား သုံးစွဲသူများထံမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 46.5 သန်း ခိုးယူခဲ့ကြောင်း သိ့ရသည်။
Credit : နောင်နောင် (Internet Journal)
Ref : KTVQ Billings News
my Ref Links : http://vr-zone.com/articles/zeus-virus-returns-to-facebook-drains-bank-accounts/35183.html http://malwaretips.com/blogs/zeus-trojan-virus/
http://latino.foxnews.com/latino/money/2013/06/06/facebook-zeus-banking-trojan-virus-steals-bank-details-money/ အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ .... လေးစားစွာဖြင့် ... စဦးသူ
Posted in: Antivirus,Knowledge and News
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စကားတစ်ခွန်းက ကျွန်တော် နောက်ထပ်စာရေးဖို့အတွက် အားဆေး တစ်ခွက်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်ဗျာ .... ။ လေးစားစွာဖြင့် .....စဦးသူ ......................
လစဉ်လတိုင်း အွန်လိုင်းကနေ ထီတိုက်စစ်နိုင်ရန်အတွက် Myanmar E-Lottery ဆိုတဲ့ website တစ်ခုကို မသိ့သေးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ အတွက် မိတ်ဆက်ပေးလ...
လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်မယ့် ၀က်ဆိုက် ၅ ခု စတင်ထုတ်လွင့်ခဲ့ချိန်က .... ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာက နည်းနည်း ကြီးကျယ်သွားတယ်ပြောရမယ်။ တစ်ကယ်...
Serial Keys for TuneUp Utilities 2012
TuneUp Utilities Software နဲ့ပါတ်သက်ပြီး Serial Key အခက်တွေ့နေသူတွေအတွက် အဆင်ပြေအောင် ပြန် Share ပေးလိုက်တာပါ။ လိုအပ်တဲ့သူတွေ အတွက်...
Facebook က အစ်ကိုတစ်ယောက်ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ကျွန်တော် ဒီ posts လေးကို ရေးလိုက်တာပါ။ Android ဖုန်းတွေ ၊ Tablet တွေမှာ မြန်မာလို မြင်...
Windows 8 တွင် Internet အသုံးပြုရန်အတွက် မြန်မာစာစနစ် Zawgyi-One Fonts အသုံးပြုနည်း
ဒီနေ့တော့ TRA-Myanmar ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကို Microsoft Company ရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ် Windows ဖြစ်တဲ့ Windows 8 မှာ Zawgyi Fonts အသုံးပြုနည်းကို...
How to Root Huawei U8660
ဒီအကြောင်းအရာလေးက ကျွန်တော့်ကို ဒီလင့် အောက်မှာ အစ်ကိုတစ်ယောက် မေးထားလို့ကျွန်တော် ရေး လိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်လည်း ဖုန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ြ...
Epson Printer Resetter Software များ (Download)
Epson Printer တွေရဲ့ Resetter software တွေပါ။ ဒီနေ့ facebook က အစ်ကို တစ်ယောက်က Epson R230 Printer အတွက် resetter software တစ်ခု တေ...
၂၀၀၇ ခုနှစ်က ပထမဦးဆုံး ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် Zeus Virus မှာ နာမည်ကြီးလူမှုရေးကွန်ရက် facebook တွင် ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြောင်းသိ့ရသည်။ အ...
Android Phone & Tablet အမျိုးပေါင်း 2400 ကျော်ကို Root လုပ်နိုင်သော Software + User Guide
ဒီ Software က Android Phone နဲ့ Tablet အမျိုးပေါင်း 2400 ကျော်ကို Root လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော် Software အသုံးပြုနည...
Internet သုံးနေသူတိုင်း ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပါ
ဒီည ကျွန်တော် အင်တာနက် သုံးနေတော့ gtalk ထဲက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီကနေ message တစ်စောင် ရောက်လာတယ်။ အဲဒီ Message ကတော့ အောက်ပါ အတိုင်းပါ...
Facebook က ဖတ်လိုလျှင် LIKE ပေးခဲ့ပါ
Trojan Zeus ဗိုင်းရပ်စ် Facebook တွင် ပြန်လည်ရောက်...
Copyright © 2011 TRA-Myanmar | Powered by စဦးသူ (ရေစကြို)